MSK, Tianjin Technology Goynta Technology CO., LTD
Meelo qodista qodista
qoditaanka qoditaanka tallaabo
T Afyare dhamaadka dhagaxshiidka
Kubadda Dhamaad Mill
Wareega Sanka Wareega Mashiinka
Haysashada Qalabka Milling
La aasaasay 2015, MSK (Tianjin) CO International Trading CO., Ltd ayaa si isdaba joog ah u koray oo u gudbisay xaqiijinta Rheinland ISO 9001.
Iyada oo leh Jarmal SACCKE xarumo shiidi shan-dhidib-sare, Jarmalka ZOLLER xarunta kormeerka aaladda lix-dhidibka, mashiinka Taiwan PALMARY iyo qalabka wax-soo-saarka caalamiga ah ee horumarsan, waxaa naga go'an inaan soo saarno aaladda CNC oo heer sare ah, xirfad leh oo hufan.
Takhasuskayagu waa naqshadeynta iyo soosaarka dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka wax lagu gooyo carbide -ka: Dhamaadka shiishadda, dhoola -tusyada, dib -u -magacaabayaasha, qasabadaha iyo aaladaha gaarka ah.
Falsafaddayada ganacsigu waa inay macaamiisheena siiso xalal dhammaystiran oo hagaajinaya hawlaha farsamaynta, kordhinta wax -soo -saarka, iyo yaraynta kharashyada. Adeegga + Tayada + Waxqabadka.
Kooxdayada La-talinta waxay kaloo bixiyaan aqoon wax-soo-saar, oo leh xalal jireed iyo dhijitaal ah oo kala duwan si ay uga caawiyaan macaamiisheena inay si ammaan ah ugu gudbaan mustaqbalka warshadaha 4.0.
qaado hab wax ku ool ah oo lagu dabakho heerarka sare ee kartida goynta birta si looga gudbo caqabadaha macaamiisha. Cilaaqaadyada ku dhisan kalsoonida iyo ixtiraamka ayaa muhiim u ah guushayada. Waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisha si aan u fahanno baahidooda.
Macluumaad qoto dheer oo qoto dheer oo ku saabsan aag kasta oo gaar ah oo shirkadeena ah, fadlan sahamin bartayada ama isticmaal qeybta nala soo xiriir si aad si toos ah ula xiriirto kooxdayada.
Waxaan leenahay in ka badan 50 shaqaale, koox injineer R&D ah, 15 injineero farsamo sare ah, 6 iib oo caalami ah iyo 6 injineero adeegga iibka kadib ah.